“ဒေါက်တာ​ဇော်​ဝေစိုးဗီဒီယိုဖိုင်က..ကွီးဖြိုးဗီဒီယိုလို…ဖြတ်ညှပ်ကပ်ဂျင်းထည့်ထားတာလို့…ပညာရှင်​တွေရှင်းပြကြပြီ..” – စွယ်စုံသုတ
@ ဘာလိုအတုလိုပြောနိုင်တာလဲ …
၁။ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးသည် လက်ကိုင်ဖုံး အသုံးပြုပြီး Zoom meeting ကိုတက်ရောက်သူဖြစ်သလို၊ Portrait Mood (ဒေါင်လိုက်) အနေအထားဖြင့် အမြဲထားသူလည်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ သိုပါ၍ သူ၏ meeting video များသည် ‌ဒေါင်လိုက် 19.5:9, 13:6, 16:9 ဖြစ်သည့် ဖုံး၏ Screen Size များအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း သူပါဝင်သော Zoom meeting ဗီဒီယိုများ Youtube တွင် အများအပြားရှိသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
၃။ Tablet သို Web Cam များဖြင့် အလျားလိုက် ရိုက်ကူးထားသော 4:3, 16:9 widescreen mood ဖြင့် ရိုက်သည့် video များမတွေ့ရသဖြင့်လည်း သူသည် လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့် online meeting များကို တက်ရောက်သူဖြစ်ကြောင်း အကြမ်းဖျင်း ပြောနိုင်ပါသည်။
၄။ သူသည် Zoom meeting တွင် မျက်နှာတခုလုံးပေါ်အောင် မချိန်တတ်လောက်အောင် မညံ့ပါ၊ သတိကြီးလွန်းသူမို သူ့ရဲ့ Video ကို အတုလုပ်ဖိုအလွန်ခက်ပါတယ်။
၅။ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ၈၅ နှင့် ၇၅ ဒီဂရီအကြားဖြစ်အောင် အကွာအဝေးကို အမြဲချိန်ထားသူဖြစ်လို သူ၏ ဦးခေါင်းအထက် ၄ ပေနှင့် ၅ ပေ ခန့် နောက်ခံမျက်နှာပြင် အမြဲပေါ်နေတယ်၊ (Pythagoras theorem ကိုအသုံးချထားတာ)
၆။ ဒါကြောင့် သူ့ Video ကို Portrait မှ wide screen (landscape) ကိုပြောင်းဖို နည်းပညာအားနည်းတဲ့ video editor ဟာ screen ကို enlarge လုပ်ရုံမှလွဲလို အခြားနည်းမရှိပါ။
၇။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဗီဒီယိုရဲ့ resolution (ကြည်လင်ပြတ်သားမှု) ကို မလိုအပ်ပဲစတေးလိုက်ရတယ်၊ သူ့ရဲ့ မျက်နှာတပြင်လုံး မပေါ်တော့ပဲ နဖူးအောက်ပိုင်းသာ ဗီဒီယိုမှာ ပါလာတဲ့ အဖြစ်ကို‌ရောက်ရော။
၈။ Zoom meeting တွင် Host (လက်ခံကျင်းပသူ) မှ ခွင့်ပြုလျင် record လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို record လုပ်ရာတွင် Zoom ၏ frame (menu bar, status bar, side frames) များပါဝင်ချင်းမရှိပေမယ့်၊ ယခုဗီဒီယိုတွင် Editing လုပ်သည့် Software ၏ frame components အားလုံးပါဝင်နေပါသည်။
၉။ မူရင်း မဟုတ်ပဲ ဖျက်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားသည့် video ဖြစ်ကြောင်း အလိုလိုဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
အခုပြောခဲ့တာတွေက ဗီဒီယိုရဲ့ အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အပေါ်ရံသဘော စမ်းစစ်ပြတာ။
@ သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ အချက်အလက်ကရောယုံကြည်ရလာ???
သတင်း အချက်အလက်အနေနဲ့ ကြည့်ရင်လည်း ဘယ်နေ့မှာ၊ ဘယ်အကြောင်းအရာကို၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘာကြောင့် ဆွေးနွေးလဲဆိုတာ ဇဝေဇဝါလေးဖြစ်ရုံမျှတောင် မထည့်ပေးနိုင်ဘူး။
သူ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေ အပြည့်အစုံကို CRPH website မှာ မျတ်တမ်းအဖြစ်တင်ထားပါတယ်၊ သူ့အနေနဲ့ ဘယ် အစည်းအဝေမှာမှ အခုလိုမပြောခဲ့ပါ။ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါ။
@ အသံနဲ့ ပါးစပ်လှုပ်တာကရော …
ဒါတွေက နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဇာတ်လမ်းသဘောအရလိုအပ်လို သတင်းလွှင့်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ထည့်သွင်းပြသတဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့
impersonation ဆိုတဲ့ နည်းပညာကို သုံးတာပါ။ နည်းပညာအသစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးသူတိုင်း သိပါတယ်။
Obama ရဲ့ အသံနဲ့ ပါးစပ်လှုပ်ပုံကို Modal လုပ်ပြီး impersonation ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ BBC က ၂၀၁၇ မှာ ဖြန့်ထားတာလေးကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
@ ဒီဗီဒီယိုကို ဘယ်သူက ဘယ်မှာတင်ထားလဲ???
‌Shwe Yee ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Youtube မှာတင်ပြီး စကစနဲ့အပေါင်းအပါတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နာရီလောက်က စဖြန့်တာပါ၊
ကွီးဖြိုးနဲ့ မောင်ဝိတ် Video လုပ်ပြီးကထဲက အဆင့်မမီလို ထပ်မလုပ်နဲ့ ၊ စောက်ရှက်ကွဲတာပဲ အဖတ်တင်မယ်လို အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ်။ စောက်မှတ်မရှိထပ်လုပ်တယ်။
# လုပ်ချင်တာက propaganda ဖြစ်သွားတာက Oppa Gangnam.
Youtube မှာတော့ Repot ထုခဲ့ပြီ။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ လုပ်လိုက်ကြစိုရဲ့။
“ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေသော မြန်မာဘောလုံးအသင်း၏ ဝတ်စုံတာဝန်ခံ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်”
“တရုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေ (၈၀၀၀) ရခိုင်သို့ ရောက်နေ”